Toetran'ny metaly sy toetra
Ahoana no ahafantarana raha metaly ny singa iray amin'ny famakiana ny vanim-potoana Periodika
Tsy ny singa metaly rehetra no mitovy, fa ny rehetra kosa mizara toetra sasantsasany. Fantaro ny dikan'ny endriky ny metaly iray ao amin'ny singa iray ary ny fomba fanovan'ny metaly karazany rehefa mifindra ianao mandritra ny fotoana iray na eo ambany vondrona iray eo amin'ny latabatra fiasa.
Inona ny toetran'ny metaly?
Ny endriky ny metaly dia anarana nomena ny toetry ny zavatra simika mifandraika amin'ny singa izay metaly . Ireo singa ara-tsimika ireo dia vokatry ny halavan'ny metaly mora ny elon-kodiny mba hamorona cations (ion-po be tsara).
Ireo toetra ara-batana mifandraika amin'ny metaly no manintona ny loko metaly, ny endriny mamirapiratra, ny density ambony, ny fitantanana avo lenta, ary ny fitarihana herinaratra. Ny ankamaroan'ny metaly dia mora levona ary matevina ary mety ho levona tsy misy tapaka. Na dia sarotra be sy metatra aza ny metaly maro, dia misy karazana sanda marobe ho an'ireny trano ireny, na dia ho an'ireo singa izay heverina ho metallika aza.
Karazan-tsoratra metaly sy tranainy
Misy ny fironana eo amin'ny metaly metaly rehefa mandehandeha sy midina ny latabatra fisintonana. Mihena ny toetran'ny metaly rehefa mihodina mandritra ny fe-potoana eo amin'ny latabatra havia miankavanana. Izany dia mitranga rehefa manaiky mora foana ny atidoha ny atôma mba hamenoana shell valenz kokoa noho ny famongorana azy ireo hanala ny akorandriaka tsy misy. Mihamitombo ny tarehimarika metaly rehefa mandroso vondrona iray eo amin'ny tabilao ianao . Izany dia satria mora kokoa ny mamela ny elon- ketsa rehefa mitombo ny elanelana atomika , izay tsy dia mahasarika loatra ny atody sy ny valan-electrons noho ny halaviran'ny elanelana eo aminy.
Famantarana ny singa amin'ny endriny metaly
Azonao ampiasaina ny latabatra fampahafantarana mba haminavina hoe na tsia ny singa iray dia hampiseho tarehimarika metaly, na dia tsy mahafantatra na inona na inona momba izany ianao. Ireto ny zavatra tokony ho fantatrao:
Ny endriky ny metaly dia aseho amin'ny metaly, izay eo amin'ny ankavia amin'ny latabatra isan-taona. Ny singa niavaka dia hydrogène, izay tsy metaly eo amin'ny toetr'andro tsotra. Na ny hydrogène aza dia mitoetra ho metaly rehefa liana na matanjaka, fa tokony heverinao fa tsy metetika izy amin'ny ankamaroan'ny tanjona.
Ny singa metaly manana tarehimarika metaly dia hita ao amin'ny vondrona na sangan'asan'ny singa, anisan'izany ny metaly alkaline, metaly ety anaty tany, metaly fifindrana (anisan'izany ny lanthanida sy actinides eo ambany vatan'ny tabilao periodika), ary ny metaly fototra. Ny karazana metaly hafa dia ahitana metaly fototra, metaly ambony, metaly vy, metaly mavesatra ary metaly sarobidy . Ny metalloids dia mampiseho tarehimarika metaly, saingy manana vondrona tsy metimety ihany koa ity vondrona ity.
Ohatra ireo singa manana endrika metaly
Ny metaly mampiseho ny toetrany tsara dia ahitana:
francium (singa manana metaly ambony indrindra)
cesium (ambony ambony indrindra amin'ny metaly ambony)
Toe-tsoratra sy metaly
Na dia ampiharina amin'ny singa madio aza ny fehezanteny dia azo aseho amin'ny endriny metaly ihany koa ny firaiketana. Ohatra, ny varahina sy ny ankamaroan'ny varahina vita amin'ny varahina, magnesium, aluminium, ary titanium dia mampiseho ny halehiben'ny metaly. Ny metaly sasany dia tsy misy afa-tsy metaly, fa ny metalloids sy ny tsy metaly kosa no be dia be, nefa mitazona ny endriky ny metaly.
Ireo karazana fiantohana simika
10 Zava-mahadomelina mahaliana
Tapakila Tapakety malalaka
Here's How to Download the Tables Periodic With Electron Configuration
Ireo tarehin-tsoratra kalesy - Ca or Atomic Number 20
Inona no atao hoe vanim-potoana eo amin'ny latabatra?
Angkor Civilisation: Ny Fanjakana Khmer taloha tany Azia Atsimoatsinanana
STCW - Fitsipi-pifehezana, fanamarinana ary fitandremana
Diagnostika sy fanaraha-maso ny fo Rotana any anaty hazo
Ahoana ny fomba hanaovana famakiam-bokom-bosoka
Ny fomba hampisy rivo-doza dia mivoaka avy amin'ny volokano
Espaniola amin'ny teny anglisy
Fampiarahan 'i George Washington University
Ny Tantaran'I Teddy Stoddard
Inona avy ny Lalàn'i Morgan?
Tsy maintsy / Tsy mila ny mifanohitra ary tsy tokony
Ny Chemistry Aorian'ny Mpitsikilo
Mozika antonontonony dimy mozika indianina ho an'ny fitsanganana sy ny fisaintsainana
Fanohanana ireo mpianatra ho an'ny fanabeazana manokana
Rock Springs Run sy ny fampielezan-kevitry ny trano fonenan'ny Mpanjaka
Fahatakarana ny Ad Libitum amin'ny fampisehoana Music
Ny sarin'ny tabernakely
Mpikambana ao amin'ny sendikan'ny ady ao Gettysburg
Pahaizana momba ny siansa momba ny siansa